Dirreewwan odeeffannoo maammiloo galmee keetiif akka ramadu sii haayyama.
Caancala Faayilii - Amaloota - Amaloota Mammiloo fili
Qabeentaa maammiloo kee galchi. Tokko tokkoo Maqaa, akaakuu fi qabeentaa tarree jijjiiruu dandeessa. Tarreewwan dabaluu ykn haquu ni dandeessa. Jechootni akka meetaadeetaati gara dhangiilee faayilii biraatti alergamu.
Tarree amalootaatti tarree haaraa ida'uuf cuqaasi.
Title is: Amaloota Maamiloo